Entertainment Archives - San Kyi Par
[ October 21, 2020 ] ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ	Entertainment
[ October 19, 2020 ] အနံ့ပျောက်သူတွေအတွက် အနံ့ပြန်ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖိုးချစ်	Entertainment
[ October 18, 2020 ] ယောက်ဖဖြစ်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရွှန်းဖောက်ကာ စနောက်လိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ	Entertainment
[ October 18, 2020 ] ဇနီးဖြစ်သူ မီးမီးခဲကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်း Brice	Entertainment
[ October 18, 2020 ] လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင်	Entertainment
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ
October 21, 2020 Su Comments Off on ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ
ဦးကျော်သူ အနေနဲ့ နှလုံး ခွဲစိတ်ထားသူဖြစ်ပြီး ဆီးချိုရောဂါ ရှိတဲ့အတွက် သူ့ကို ချစ်တဲ့ နာရေးကူညီမှု အသင်းသားတွေ၊ ပရိသတ်တွေကလည်း စိုးရိမ်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဦးကျော်သူပါဝင်တဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်းဟာ COVID-19 ကာလမှာ ဈာပနပို့ဆောင်ခြင်း၊ ရောဂါပိုးကာကွယ်ရေးအတွက် ဆေးဖြန်းခြင်း၊ မီးဘေးအန္တရာယ် တားဆီးရေး အတွက် ရေသယ်ကားများနဲ့ ကူညီပေးခြင်း၊ ရေရှားပါးတဲ့ ကျေးရွာတွေမှာ ရေအလှူပြုခြင်း စတဲ့ ကုသိုလ်ရေးတွေ ဆောင်ရွက်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးကျော်သူ အနေနဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) […]
အနံ့ပျောက်သူတွေအတွက် အနံ့ပြန်ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖိုးချစ်
October 19, 2020 Su Comments Off on အနံ့ပျောက်သူတွေအတွက် အနံ့ပြန်ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖိုးချစ်
ဖိုးချစ်ကတော့ လတ်တလောတစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ ဖြစ်ပွားနေတဲ့ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရတဲ့ လက္ခဏာတွေထဲက တစ်ခုဖြစ်တဲ့ အနံ့ပျောက်တာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သူသိထားတဲ့နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ကြက်သွန်နီဥကို အပေါ်ယံအခွံခွာကာ အလုံးလိုက်ဝါးပြီး အရည်ကိုပါမြိုချပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးနှစ်ကြိမ်ခန့်ပြုလုပ်ပြီးတာနဲ့ အနံ့ပြန်ရမှာဖြစ်ပြီး လူတချို့ကတော့ နောက်ရက်တွေကျရင် ဝမ်းနည်းနည်းသွားတတ်ပါတယ်တဲ့၊ ဒါပေမယ့် နုံးချိသွားခြင်းမရှိပါဘူးတဲ့ ပရိသတ်ကြီးရေ..ပထမ အမွှေးရနံ့များရလာမှာဖြစ်ပြီး နောက်ရက်တွေမှာတော့ တခြားအနံ့တွေ ရလာပါမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း မျှဝေခဲ့ပါတယ်။ ငွေလည်းမကုန်၊ မပင်ပန်းဘဲ လွယ်ကူစွာလိုက်လုပ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်တဲ့အပြင် အနံ့ပျောက်သူ ဆယ်ဦးလောက် […]
ယောက်ဖဖြစ်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရွှန်းဖောက်ကာ စနောက်လိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ
October 18, 2020 Su Comments Off on ယောက်ဖဖြစ်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရွှန်းဖောက်ကာ စနောက်လိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ
ဦးဇေသီဟကတော့ ပရိတ်သတ်တွေ သိပြီးဖြစ်တဲ့အတိုင်း ပြည်သူချစ် မင်းသမီးကြီး နန္ဒာလှိုင်ရဲ့ ခင်ပွန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သမီးလေး ၃ ယောက်နဲ့အတူ ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုဘဝလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူပါ။ ဦးဇေသီဟကတော့ ယောက်ဖဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေလို ခင်မင်ကာ အမြဲစနောက်ပြီး ပို့စ်တင်လေ့ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။ အခုတခါမှာလည်း ယောက်ဖဖြစ်သူ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပက်သက်ပြီး […]
ဇနီးဖြစ်သူ မီးမီးခဲကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်း Brice
October 18, 2020 Su Comments Off on ဇနီးဖြစ်သူ မီးမီးခဲကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်း Brice
ပြည်သူချစ် တေးသံရှင် မီးမီးခဲကတော့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့က အားလုံးကို နှုတ်ဆက်ကာ ဘဝတပါးကို ပြောင်းလဲကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ကွယ်လွန်ခြင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး ယနေ့မှာတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Brice က အခုလိုပဲ ပရိတ်သတ်ထံ ရင်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။ ခင်ပွန်း Brice ပြောခဲ့တာကတော့ ” Our family is deeply saddened by the passing of MeeMeeKhel – […]
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင်
October 18, 2020 Su Comments Off on လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင်
မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင်ကတော့ အားလုံးနဲ့ အထူးမိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုလောက်အောင် သိပြီးဖြစ်ကြမှာပါနော်။ အဆီပိုမရှိ ကျစ်လစ်တဲ့ ခန္တာကိုယ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး ကလေးနှစ်ယောက် မိခင်လို့ မထင်ရလောက်အောင် နုပျိုနေတဲ့ မင်းသမီးချောပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ ချစ်ရတဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့အတူ ပျော်စရာကောင်းတဲ့ မိသားစုလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ သူမရဲ့ ခင်ပွန်းနဲ့ အိမ်ထောင်မပြုခင် လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ချစ်စရာအမှတ်တရလေးကို အခုလိုပဲ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ” လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်တုန်းကပေါ့ ကောင်လေးတစ်ယောက် […]
မီးမီးခဲအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပို့စ်တင်ပြီးမှ ပြန်ဖျက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း
October 18, 2020 Su Comments Off on မီးမီးခဲအတွက် ဝမ်းနည်းကြောင်း ပို့စ်တင်ပြီးမှ ပြန်ဖျက်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ရှင်းပြခဲ့တဲ့ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်း
ပရိတ်သတ်တွေ ချစ်ခင်အားပေးရတဲ့ အဆိုတော် မီးမီးခဲကတော့ အောက်တိုဘာ ၁၆ ရက်နေ့မှာ ရင်သားကင်ဆာနဲ့ ကွယ်လွန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့ အခုလို ဆုံးပါးခဲ့ရတာကြောင့် ပရိတ်သတ်တွေသာမက အနုပညာရှင်များကပါ ထပ်တူ ဝမ်းနည်းနေခဲ့ကြပါတယ်။ ခင်ပွန်းဟောင်းဖြစ်သူ အဆိုတော် ထူးအယ်လင်းကလည်း မီးမီးခဲအတွက် ကောင်းရာသုဂတိလားပါစေကြောင်း ဆုတောင်းစကားကို ပို့စ်တင်ပြီး ပြောခဲ့ပေမဲ့ မိနစ်ပိုင်းအကြာမှာပဲ အဆိုပါ ပို့စ်ကို ဖျက်သွားခဲ့ပါတယ်။ အခုလို ပို့စ်ဖျက်ရတဲ့အကြောင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူ့ရဲ့ ဖေ့ဘုတ်စာမျက်နှာကနေတဆင့် Live […]
နာရီပိုင်းအတွင်း သိန်း ၅ ထောင်ကျော်ဖိုး ရောင်းအားကောင်းခဲ့တာကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
October 18, 2020 Su Comments Off on နာရီပိုင်းအတွင်း သိန်း ၅ ထောင်ကျော်ဖိုး ရောင်းအားကောင်းခဲ့တာကြောင့် ပျော်ရွှင်နေတဲ့ ထက်ထက်မိုးဦး
ပရိတ်သတ်ကြီးရေ ကြော်ညာမင်းသမီးလို့ အားလုံးကတင်စားရတဲ့ မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ အွန်လိုင်းကနေ Live လွှင့်ကာ စိန်ရွှေရတနာတွေ ရောင်းချနေတာပါ။ မင်းသမီးအဖြစ် အနုပညာလုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်နေချိန်ကလည်း ပရိတ်သတ်အားပေးမှုကို တခဲနက်ရရှိခဲ့တဲ့ ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ ဈေးရောင်းတဲ့အခါမှာလည်း အားလုံးက ဝယ်ယူအားပေးခဲ့တာကြောင့် ပျော်ရွှင်နေခဲ့တာပါ။ မင်းသမီးချော ထက်ထက်မိုးဦးကတော့ သူမအနေနဲ့ နာရီပိုင်းအတွင်း သိန်းထောင်ချီရောင်းခဲ့ရတာကြောင့် ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက်လေးကို အခုလို မျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ” ရတနာ ရှိရာ ရတနာတွေလာကြပါစေ ထက်ကတော့ နိုင်ငံတကာ […]
October 17, 2020 Su Comments Off on မီးမီးခဲနဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရလိုက်တဲ့ အမှတ်တရတွေအကြောင်းပြောပြလာတဲ့ သက်မွန်မြင့်
ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလ (၁၆)ရက်နေ့မှာ ပရိသတ်တွေချစ်ရတဲ့ တေးသံရှင် မီးမီးခဲတစ်ယောက် ဘဝတစ်ပါးကို ကူးပြောင်းကွယ်လွန်သွားခဲ့တဲ့အတွက် အနုပညာရှင် ညီအစ်ကိုမောင်နှမတွေနဲ့ ပရိသတ်တွေအားလုံး စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ကြရပါတယ် ။ မီးမီးခဲဟာ လူသေရင်တောင် နာမည်သေမသွားမယ့် အဆိုတော်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူ့ရဲ့သီချင်းတွေဟာ ပရိသတ်တွေကို အမြဲ လွှမ်းမိုးနေဦးမှာပါ ။ ပရိတ်သတ်တွေသာမက အနုပညာရှင်တွေ အားလုံးကလည်း မီးမီးခဲကို ဆုံးရှုံးရတဲ့အတွက် နှမြောတသ ဝမ်းနည်းနေခဲ့ကြတာပါ။ လတ်တလောမှာတော့ ပရိသတ်အချစ်တော် သက်မွန်မြင့်က သူမနဲ့ မီးမီးခဲတို့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တဲ့ အမှတ်တရတွေ […]
ပရိသတ်တွေစိတ်ညစ်မှာစိုးလို့ ကင်ဆာဝေဒနာကြီးကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားခဲ့တဲ့ မီးမီးခဲအကြောင်း ကွယ်လွန်သွားချိန်မှ ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ဟန်ထူးဈာန်
October 16, 2020 Su Comments Off on ပရိသတ်တွေစိတ်ညစ်မှာစိုးလို့ ကင်ဆာဝေဒနာကြီးကို ကြိတ်မှိတ်ခံစားခဲ့တဲ့ မီးမီးခဲအကြောင်း ကွယ်လွန်သွားချိန်မှ ဖွင့်ဟပြောပြလာတဲ့ ဟန်ထူးဈာန်
အဆိုတော် မီးမီးခဲကတော့ ဒီကနေ့ အောက်တိုဘာလ (၁၆) ရက်နေ့မှာပဲ သူမလက်ရှိ နေထိုင်ရာ သြစတေးလျနိုင်ငံ စံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ ၃၁ မိနစ်အချိန်မှာ ဘဝတစ်ပါးသို့ ကူးပြောင်း ကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာ အဆင့် (၄) ကို ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲက ဆရာဝန်တွေကိုယ်တိုင်က လက်လျှော့ထားရတဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေမယ့် အပြုံးမပျက်ပဲ ပရိသတ်တွေရှေ့မှာ နေနိုင်ခဲ့သူတစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့မှာတော့ အဆိုတော် ဟန်ထူးဈာန်က သူ့ရဲ့အစ်မတစ်ယောက်လိုချစ်ရတဲ့ […]
ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ယနေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲ
October 16, 2020 Su Comments Off on ကင်ဆာရောဂါနဲ့ ယနေ့မှာပဲ ကွယ်လွန်သွားပြီဖြစ်တဲ့ မီးမီးခဲ
အဆိုတော် မီးမီးခဲကတော့ ကင်ဆာရောဂါခံစားနေခဲ့ရတာ နှစ်ကာလ ကြာမြင့်နေခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ဆာနောက်ဆုံးအဆင့်ကို ခံစားနေခဲ့ရပေမဲ့ စိတ်ဓာတ်ခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့ ရှိနေခဲ့တာကြောင့် အားလုံးက ချီးကျူးအားပေးခဲ့ကြပါတယ်။ မီးမီးခဲကတော့ သူနေထိုင်ရာ သြစတေးလျနိုင်ငံမှာပဲ ယနေ့ သြစတေးလျစံတော်ချိန် ည ၉ နာရီ ၃၁ မိနစ်မှာ ဆုံးပါးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဆုံးပါးခဲ့တဲ့ သတင်းနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူမရဲ့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကတော့ အခုလိုပဲ အသိပေးခဲ့ပါတယ်။ ” ကျွန်တော်တို့ ချစ်တဲ့ […]
ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ October 21, 2020
အနံ့ပျောက်သူတွေအတွက် အနံ့ပြန်ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖိုးချစ် October 19, 2020
ယောက်ဖဖြစ်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရွှန်းဖောက်ကာ စနောက်လိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ October 18, 2020
ဇနီးဖြစ်သူ မီးမီးခဲကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်း Brice October 18, 2020
လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင် October 18, 2020
October 21, 2020 Comments Off on ကိုဗစ်ကူးစက်ခံလိုက်ရတဲ့ နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူ
October 19, 2020 Comments Off on အနံ့ပျောက်သူတွေအတွက် အနံ့ပြန်ရမယ့်နည်းလမ်းကောင်းလေးကို မျှဝေပေးလာတဲ့ ဖိုးချစ်
October 18, 2020 Comments Off on ယောက်ဖဖြစ်တဲ့ စိန်ဖြိုးလှိုင် ( မောင် ) ရဲ့ နာမည်နဲ့ ပက်သက်ပြီး အရွှန်းဖောက်ကာ စနောက်လိုက်တဲ့ ဦးဇေသီဟ
October 18, 2020 Comments Off on ဇနီးဖြစ်သူ မီးမီးခဲကို ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့အပေါ် စိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ ရင်ဖွင့်စကားဆိုလာတဲ့ ခင်ပွန်း Brice
October 18, 2020 Comments Off on လွန်ခဲ့တဲ့ ၅ နှစ်က ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ စတင်သိကျွမ်းခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရလေးကို ပြောပြခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် သန္တာလှိုင်
Sankyipar isapopular online media for Myanmar News and Entertainment. Visit us on Facebook Page.
Address:3A , Kyi Myin Daing, Yangon
Copyright © 2019 | Sankyipar